Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in amniga lagu sugi karo oo kaliya dowladda iyo shacabka oo is kaashada Madaxweynaha oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahy in ay kala shaqeeyaan ciidamada sugida nabad-galyada oo ah sida kaliya loo adkaan karo ayuu yiri Al-shabaab. Waxaa uu sheegay in amniga oo lagu guuleysto uu horseedayo horumar, ganacsiga oo kobca iyo waliba maalgeshi lagu sameysto dalka, kaasoo ay shaqo abuur ka heli karaan dhallinta Soomaaliyeed. “Amniga dowladda iyo ciidamada kaliya ma saarna, shacabka Soomaaliyeed door ayuu ku leeyahay, waan ognahay in ay ka dharag-sanyihiin qolada nabada ka soo horjeeda maalin waliba xasuuqa iyo bur burka ay ku hayaan dadka aan waxba galabsan, in aan si wada jir ah uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax Alle iyo wixii macluumaad ah ay ka hayaan, si aan uga hortegno”ayuu yiri madaxweynaha dalka. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xili howlgalo nabad-galyada lagu sugayo todobaadyadii ugu danbeeyayba ay ka socdeen magaalada Muqdisho |
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in amniga lagu sugi karo oo kaliya dowladda iyo shacabka oo is kaashada Madaxweynaha oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahy in ay kala shaqeeyaan ciidamada sugida nabad-galyada oo ah sida kaliya loo adkaan karo ayuu yiri Al-shabaab. Waxaa uu sheegay in amniga oo lagu guuleysto uu horseedayo horumar, ganacsiga oo kobca iyo waliba maalgeshi lagu sameysto dalka, kaasoo ay shaqo abuur ka heli karaan dhallinta Soomaaliyeed. “Amniga dowladda iyo ciidamada kaliya ma saarna, shacabka Soomaaliyeed door ayuu ku leeyahay, waan ognahay in ay ka dharag-sanyihiin qolada nabada ka soo horjeeda maalin waliba xasuuqa iyo bur burka ay ku hayaan dadka aan waxba galabsan, in aan si wada jir ah uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax Alle iyo wixii macluumaad ah ay ka hayaan, si aan uga hortegno”ayuu yiri madaxweynaha dalka. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xili howlgalo nabad-galyada lagu sugayo todobaadyadii ugu danbeeyayba ay ka socdeen magaalada Muqdisho
Gaarisa (estvive) 10/08/2017
Siyaasiga Aadan Barre Ducaalle ayaa uga guuleystay kursiga xildhibaannimada ee magaalada Gaarisa ninka ay dhinaca siyaasada ku loolamaan ee Faarax Macalin.
Dalka Kenya waxaa ka dhacay doorasho aad u xiiso badneed, waxaana wali la sugayaa shaacinta natiijada rasmiga ah ee doorashdii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacay, waxaana la filayaa in uu mar kale kursiga kusoo laabto madaxweyne Uhurru Kenayatt